Maraykanka oo sheegay in ciidamadiisa uu kala baxayo Afqaanistaan. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Maraykanka oo sheegay in ciidamadiisa uu kala baxayo Afqaanistaan.
Last updated Jun 26, 2019 512 0
Wasiirka arimaha dibadda ee Maraykanka ninka lagu magacaabo Mike Pompeo oo booqasho qarsoodi ah oo aan horey loo shaacin ku tagay magaalada Kaabul ee caasimadda wadanka Afqaanistaan ayaa sheegay in dowladiisu ay diyaar u tahay iney gebi ahanaba isaga baxdo Afqaanistaan.
Pompeo ayaa kulamo kala duwan oo saacado qaatay la yeeshey madaxweynaha maamulka taagta daran ee Kaabul Ashraf Qani iyo saraakiisha ciidamada Maraykanka ee Afqaanistaan, wuxuuna shaaca ka qaaday in ciidamadooda sida ugu dhaqsiyaha badan ugala baxayaan wadanka Afqaanistaan.
“Waxaan si cad ugu sheegnay xarakada Dhaalibaan in ciidamadeena aan sida ugu dhaqsiyaha badan uga saareyno wadanka Afqaanistaan, balse waqtiga rasmiga ah ee aan baxeyno uma sheegin” ayuu yiri wasiirka arimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo.
Sanadkii 2001-dii, ayay dowladda Maraykanka ku duushey wadanka Afqaanistaan, iyadoo ku mar marsiyooneysa iney soo qabaneyso rag mujaahidiin ah oo ay sheegtay iney halis ku yihiin amnigeeda.
Inkastoo jeneraallada Pentagonka ay filayeen in maalmo lagu soo afjari karo Imaarada Islaamiga ee Afqaanistaan, hadana dagaalkan wuxuu noqday mid kamid ah kuwii ugu dheeraa ee ay gasho dowaldda Maraykanka.
Wuxuu soconayaa 18 sano oo xiriir ah, kumanaan kun oo askari oo Maraykan ah ayaana la bilqay fagaarayaasha dagaalka iyagoo meyd ah, waxaana jira tiro kale oo intaas kabdan oo dhaawcyo ah, khasaaraha maaliyadeedna warkiisaba ha sheegin.
18 sano kadib, Maraykanku wuxuu ku baryootamayaa in loo ogolaado ka bixitaanka dalka Afqaanistaan, inta uu socoda insixaabkiisana aan la beegsan, balse waxaa arinkaas ka biya diidan Imaarada islaamiga ee Afqaanistaan oo sheegeysa in rasaastu ay soconeysa inta askariga ugu dambeeya ee ajanbi ah uu isaga baxo wadanka muslimka ah ee Afqaanistaan.
Reer Afqaanistaan, dabci ahaan marka looga hadlo, waxaa lagu tilmaamaa iney yihiin dad gumeysi diid ah, oo aan ka waaban iska dhicinta Shisheeye weliba oo kusoo duula, waxaana Aqoonyahannada ka faallooda arimaha caalamka Islaamka in wadankan lagu san dulleeyay awoodo waaweyn oo gumeysi ah, Maraykankuna uu halkaas mari doono.